तपाईंलाई आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाको कुन पक्ष राम्रो लाग्छ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः फाल्गुन २, २०७० - साप्ताहिक
मलाई त कुनै पनि पक्ष राम्रो लाग्दैन। म माया गरेर पागल भएको मान्छे हुँ।
- सिर्जु थापा
जति ढाँटे पनि थाहै नपाउने पक्ष राम्रो लाग्छ।
- वसन्त विवस आचार्य
समझदार, मनको कुरा बुझ्ने र आफ्नो काममा रमाउने पक्ष।
- शोभा पाठक
सधैँ हाँसिरहने, कहिल्यै नरिसाउने, अनि मलाई धेरै माया गर्ने पक्ष मन पर्छ।
- हिमा घिमिरे
मलाई प्रेममा विश्वास छैन।
- जनकसिंह ठकुरी
मेरो त केटा साथी नै छैन।
हुँदै नभा'की प्रेमिकाको के कुरा भयो र?
अरूका केटा साथीहरूका बारेमा मलाई भन्ने बानी मन पर्छ।
- अनन्त घिमिरे
रक्सी खाएका बेला नकराउने तर भोलिपल्ट थर्काउने।
- किशन राई
मेरो त केटी साथी नै छैनन्।
- मिलन भुजेल
मनको कुरा बुझ्ने।
- खेम गुरुङ
- प्रकाश खड्का
- योगेश लिम्बू
छिट्टै रिसाउने, छिट्टै खुसी हुने अनि माया गर्ने।
- सोझो केटो
जिस्किएर हँसाइरहने बानी।
- छुच्ची केटी
मनको कुरा बुझ्ने, उत्साह, उमंग थप्ने, हरेक पल साथ दिने, अटुट माया दिने, अनी उनमा भएको आत्मविश्वास।
- दर्शन गिरी
रिसाउने बानी मन पर्छ।
- प्रिन्स रिजाल
कुरा बुझ्ने बानी।
कुनै कुरा छल नगरी सेयर गर्ने बानी।
- देविका नेम्बाङ
नरिसाउने, अनि कुरा बुझ्ने बानी मन पर्छ।
- रुपा मोक्तान
स-साना कुरामा पनि झगडा गर्ने बानी।
- आशिष भट्टराई
मुस्कुराएर बोल्ने बानी।
- कमल बिके
सधैं सम्झिने, माया दिने, ख्याल गर्ने बानी राम्रो लाग्छ।
- देव राजालिम राई
नचाहेरै पनि धोका दिने बानी मन पर्छ मलाई।
सबै कुरा सेयर गर्ने बानी।
- मोहन श्रेष्ठ
जति गाली गरे पनि हाँसीहाँसी कुरा गर्ने बानी।
- अशोक तिवारी
- निश्मा अधिकारी
जिस्काएर बोल्ने बानी अनि जिस्किँदा-जिस्कँदै रिसाउने बानी असाध्यै मन पर्छ।
- रामकृष्ण खरेल
यार, सबैले जवाफ दिन मिल्ने प्रश्न सोध्नु नि।
- होम मगर
ओठ अनि आँखाहरू।
- प्रबिन थापा
मेरो विश्वास गर्ने बानी।
- आदर्श मगर
मुस्कुराएर बोल्ने बानी मन पर्छ।
- गंगा बूढामगर
मेरा लागि त यो प्रश्न कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै हो। कसैंसंग मेरो प्रेम नै बसेको छैन।
- तारा बसेल
मेरो खुब ख्याल गर्छिन्, त्यही बानी मन पर्छ।
- सुनिल गुप्ता
माया गर्नेको सबै पक्ष मन पर्छ।
- माया मगर
उनको व्यवहार, हास्ने-बोल्ने शैली।
- राजु पोखरेल
धेरै विश्वास गर्ने।
- रवीन्द्र बेहाल
दिलको कुरा बुझ्ने।
- धिरेन्द्र यादव
बोली र केयर गर्ने बानी।
- लक्ष्मी न्यौपाने
- राजेन्द्र छन्त्याल
रुने पक्ष राम्रो लाग्छ।
- रोस्तिक तिमिल्सिना
मसँग रिसाउने पक्ष राम्रो लाग्छ। ऊ रिसाउँदा अझै राम्री देखिन्छे। उसले मलाई रुवाएर पनि फकाउँछे, माया गर्छे।
- हिम्स राई
केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच, अनि सकारात्मक हौसला र समर्पण ।
- कुशल क्रान्ति
उसको हाँसो अनि मलाई सम्मान गर्ने तरीका राम्रो लाग्छ।
- निरोज न्यौपाने
मेरो समस्या समाधान गर्ने र मलाई माया गर्ने तरिका।
उनको पहिरन र सम्मान गर्ने पक्ष।
- पुष्कर खत्री
सधैं हँसाइरहने, कहिल्यै नरिसाउने, अनि मलाई धेरै माया गर्ने बानी।
मेरो त केटा साथी नै छैन। कुन पक्ष मनपर्छ भन्नु? बरु यसो एक जना मिलाइदिनु न।
- प्रजिता पाण्डे
सबै पक्ष मनपर्छ।
- समिरा बस्नेत
मेरो त केटा साथी नै छैन। के भन्नु र? पछि भएपछि भनौंला नि।
- दीपा निरौला
मेरो अहिलेसम्म केटा साथी छैन।
- गंगा पन्थी, निशा केसी
कहिल्यै नरिसाउने, आफूले भनेको कुरा मान्ने, अरूको कुरामा विश्वास नगर्ने, सही बोल्नेको पक्षमा लाग्ने।
- मेलिना लामा स्याङ्देन
आफ्ना वास्तविकता जे हो त्यही भन्ने, नढाँट्ने बानी मनपर्छ।
- शर्मिला शर्मा
स्वर र मुस्कान।
- धिमाल कान्छा किरन
आफ्नो प्रेमिकाको सबै पक्ष मनपर्छ तर रोएको र दुखमा परेको पटक्कै मन पर्दैन।
- सुबास बिसी अनुपम
उनको आँखा मनपर्छ अनि मलाई जिस्क्याइरहने, हँसाइरहने, हाँसी-हाँसी झगडा गर्ने र मलाई माया गर्ने बानी पनि खुब मनपर्छ।
- शैलेन्द्र प्रसाइ
हरेक कुरामा चासो दिने र ख्याल गर्ने पक्ष।
- प्रतिज्ञा रन्जितकार
रिसाउने र झगडा गर्ने बानी मनपर्छ। किनभने रिसाउँदा र झगडा गर्दा उनको असली रूप देखिन्छ।
- वसन्त सिंह ठकुरी
- कपिल गौली
यो पक्ष र त्यो पक्ष राम्रो लाग्नलाई प्रेमिका हुनुपर्‍यो नि। बरु यसो हामीलाई पनि खोजिदिनुपर्‍यो अनि हामी पनि यो र त्यो राम्रो लाग्यो भनौंला।
- आर्याम धिताल
हुँदा सय टेन्सन हुन्छ रे, नहुँदा छैन भन्यो एउटै टेन्सन। आफू पनि यही कोटीमा छु।
- किशोर अधिकारी
मलाई त उसको धोका दिने बानी नै मनपर्छ। अरू नसके पनि मलाई रुवाउन त जानेको छ। मलाई चोट दिन त जानेको छ।
- प्रतिमा खनाल
प्रेम भन्ने कुरै बकवास लाग्छ मलाई त।
- अञ्जु गुरुङ
अनुहार मात्र राम्रो लाग्छ, बेहोरा त ...।
सधैं साँचो बोल्ने पक्ष राम्रो लाग्छ।
- रमा मादेन पन्धाक
मेरा त केटीसाथी नै छैनन्। कसरी भन्नु?
- आभास कठायत
सधैं साँचो बोल्ने, आफ्नो भन्दा बढी मेरो ख्याल गर्ने।
- अजय कदमाहा
यो विषयमा विवाह गरेपछि कुरा गरौंला।
- सन्दर्भ चौधरी, चकदह
खै के भन्नु? आफ्नो त प्रेम नै परेको छैन।
- संगम पाण्डे
मलाई के थाहा?
- सरु केसी
माया र विश्वास गर्ने, अनि केयर गर्ने बानी मन पर्छ।
- सुशीला बूढा क्षेत्री
स्वयं आफूलाई भन्दा बढी माया गर्छु भनेर गफ दिएको मन पर्छ।
- मिलन पौडेल
उनको मुस्कान र इमान्दारीता।
- सुन आचार्य
सबै पक्ष राम्रो लाग्छ। जिद्दी गर्ने बानीचाहिँ सबैभन्दा राम्रो छ। त्यो बेला उनी सुन्दर लाग्छिन्।
कहिल्यै नाइँ नभन्ने, सधैं हुन्छ भन्ने बानी।
केही पर्दा सहयोग गर्ने, सधैं साँचो बोल्ने।
- लिखत खड्का
समझदार, साँचो बोल्ने तथा केयर गर्ने पक्ष मन पर्छ।
सबैभन्दा राम्राे पक्ष भनेको हरेक अवस्थामा मलाई सहयोग गर्नु हो।
- प्रशंसा प्रिन्सेस
भेट्न आउँछु भनेर आश देखाउँछिन्, धेरै बेर सम्म कुराउँछिन्, तर आउँदिनन्। यो बानीचाहिँ मलाई मन पर्छ।
आई लभ यु भन्न लजाउने बानी मन पर्छ।
- नवजीवन/सुशान्त कदमाहा
दुःख र हरेसमा सधैं साथ दिने कुरा मन पर्छ।
- कौशिला अधिकारी
हरेक कुरामा शंका गर्ने बानी एकदम मन पर्छ।
उनले माया गर्ने शैली।
- निशा योञ्जन
आफू त एक्लो मान्छे परियो। केही टेन्सन छैन।
- अजय योगी
फेसबुक नचलाउने पक्ष राम्रो लाग्छ।
- जिबी मगर
रिसाउने बानी खुब मन पर्छ।
- सुनिल काफ्ले
बूढीको त भन्न सकिन्छ तर प्रेमिकाको भन्न सकिँदैन।
- शरण अधिकारी
के हो मेरी प्रेमिकाको राम्रो पक्ष थाहा पाएर फकाउने विचार गर्नुभयो कि क्या हो? मलाई त शंका लाग्न थाल्यो, त्यसैले भन्दिनँ।
- कल्पित भट्ट
सधैं हाँसिरहने, नराम्रो नबोल्ने।
- जितु श्रेष्ठ
हरेक कुरा सेयर गर्ने बानी मन पर्छ।
- प्रदिप चौधरी, कदमाहा
मेरो गल्ती हाँसी-हाँसी सुधार्ने मौका दिने पक्ष।
- हरि बोहोरा
- प्रेम राजवाहक
- कमल जिसी
केटी साथी भन्नु आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भयो। घर, समाज र राष्ट्रले त्यसका लागि बजेट नछुट्टयाउने हो भने केटी साथी पाउनै मुस्किल छ। तैपनि दाम हुनेहरूले आफ्ना केटा साथीहरूलाई छिनछिनमा फोन गरिरहेको असाध्यै मन पर्छ।
- मोरङ कान्छा
मलाई केही पिउने कुरा दिएर माया देखाउँछिन्। यो पक्ष मन पर्छ।
मलाई मिस्ड कल गर्ने बानी मन पर्छ। व्यस्त भए पनि दिनको ३०-४० पटक मिस्ड कल गर्छिन्।
बोली। वा ! क्या राम्रो।
मलाई सुख-दुःखमा साथ दिने बानी राम्रो लाग्छ।
- तपेन्द्र शाही ठकुरी
मेरी प्रेमिकाले कुनै नराम्रो गरेकी छैनन्। सबै पक्ष मन पर्छ।
- सुजन अधिकारी
चुरोट, जाँड, रक्सी नखाने पक्ष।
- दीपा लामा
आफूलाई भन्दा बढी विश्वास गर्ने, चोखो माया गर्ने।
- यजाज खान
मेरो खुसीमा आफ्नो पनि खुसी देख्नु, अनि मलाई सधैं खुसी राख्ने पक्ष राम्रो लाग्छ।
- अमृता पुन
मेरा निम्ति गर्ने चिन्ता तथा मलाई गर्ने माया नै मन पर्छ।
- चुमु नेवार
मलाई साथ दिने बानी।
- माया अर्याल
ल, कस्तो प्रश्न सोध्नुभएको? केटी साथी नै छैन। कुन पक्ष राम्रो भन्नु?
- रोशन लिम्बू
के गर्नु आफुले त केटी साथी बनाइएन। के राम्रो, के नराम्रो कसरी भन्नु?
- लक्ष्मण गौतम
नो जिएफ, नो टेन्सन।
- विकास मगर
गलत कुराबाट टाढा रहन ट्राफिक प्रहरीले झैं सिग्नल दिएर सधैं झस्काइरहन्छिन्।
- नवीन संकल्प
मलाई बुझ्ने, मीठो बोल्ने, कुनै कुरामा पनि नबिझाउने अनि आफूलाई माया गर्नेको सबै पक्ष मन पर्छ।
- दिवस आरके
केयर गर्ने बानी मन पर्छ। रिसाएको बेला झनै मन पर्छ। साधारण व्यवहार अझ राम्रो लाग्छ।
- अनिता सुब्बा
ठूलो आँखा र मीठो मुस्कान।
- सत्य जोशी
मेरी सानु मुस्कुराएको अनि मलाई डल्ले भनेको मन पर्छ।
उनको सुन्दरता र नाच्ने कलाबाट प्रभावित छु।
- महेश केरुङ
दुःखमा साथ दिने, अनि सधैं साहस दिने बानी मन पर्छ।
- हिमालय शाह
मलाई त रिसाउने बानी पो मन पर्छ।
- गोमा चौहान
सानो कुरालाई ठूलो बनाएर झगडा गरिरहने बानी मन पर्छ।